Bilowga Toluna: Caqli-siinta Waqti-Sirdoonka Macaamiisha ee Bulsho Caalami ah | Martech Zone
Bilowga Toluna waa jawi deg deg ah, dhammaad ilaa dhammaad, waqtiga dhabta ah madal sirdoonka macaamiisha ah. Badeecaduhu waxay bixiyaan fikradaha macaamiisha, cilmi baarista suuqa, waxayna awood u siinayaan macaamiisha inay isla markaaba ku sameeyaan cilmi baaris tiro iyo tayoba leh waqtiga-dhabta ah. Si ka duwan barnaamijyada cilmi-baarista suuqa, Toluna wuxuu isku daraa tiknoolajiyada loo baahan yahay iyo helitaanka bulshada adduunka si loo siiyo macluumaadka aad u baahan tahay.
Hadday tahay wax soo saar cusub oo wax soo saar leh ama nooc tijaabo ah iyo farriimo isgaarsiineed, Toluna waxay leedahay barmaamij sirdoon macaamiil ah oo kaa caawinaya cilmi baarista suuqa ee macaamiisha:
Sirdoonka Macaamiisha - U hel il keliya dhammaan aragtidaada macaamiisha. Toluna Start waa aalad dhamaadka iyo dhamaadka sirdoonka macaamiisha isla markaana leh hal marin. Soo gal xalal badan oo aragtiyo otomaatig ah oo daboolaya naqshadeynta sahanka, jawaab-bixiyeyaasha sahanka isku-dhafan, iyo warbixinta dashboorrada oo ay kujiraan fikradaha iyo talooyinka.
Falanqaynta iyo Dashboodyada - Isla markiiba marin u hel xogtaada. Laga soo bilaabo warbixinnada waqtiga dhabta ah iyo jawaabaha hadalka ee falanqaynta horumarsan. Ku cabiro waxqabadka KPIs daqiiqado gudahood oo leh shaashado loogu talagalay inay bixiyaan aragtiyo ficil ah. Xogta miisaanka, abuur dad-yar, shaandhee oo samee dhammaan heerarka imtixaanka muhiimada. Jiid oo hoos u dhig boggaga PowerPoint, erayga daruur verbatim, miisas dhisto, oo dib u socodsiiya calammo sida loogu baahdo.
Bulshooyinka iyo Wadahadalka Tooska ah - Si dhakhso leh ula macaamil dadka muhiimka u ah astaantaada. Qod qoto dheer oo dabool shucuurta iyo dhiirigelinta dhaqaajisa dhaqanka macaamiisha. In la horumariyo bulshooyinka shirkadaha ka dhex muuqda oo si buuxda u soo jiidasho leh - iyadoon loo eegin bartilmaameedkaaga suuqa. Samee Dood Wadaag Live ah oo calaamadeysan daqiiqado gudahood oo aad la macaamisho bartilmaameedkaaga.
Fahanka Habdhaqanka - Fahmaan habdhaqanka macaamiisha guud ahaan mobilada iyo desktop-ka, websaydhyada, iyo barnaamijyada. Oo ay ku jiraan barnaamijyadooda la rakibay, qaababka hagidda, dabeecadda daalacashada, dhaqanka raadinta, iyo iibsiga macluumaadka dhammaan dukaamada adduunka ugu waaweyn.
Muunad otomaatig ah - Helitaanka jawaabeyaasha waqtiga-dhabta ah. Qiime, qiimee suurta galnimada iyo in lagu bilaabo mashaariic daqiiqado gudahood. Xalka muunad qaadista otomaatiga ah ee Toluna waxay siineysaa cilmi baarayaashu qadka tooska ah ee bulshadeena wax ku oolka ah ee sifiican u qeexan, jawaabeyaasha aadka ugu hawlan.
Beesha Global Panel - Taabo awoodda in ka badan 30 milyan oo qof adduunka oo dhan. Xubnahayagu waa diyaar, diyaar, waxayna awoodaan inay ku siiyaan ra'yi-celinta aad u baahan tahay, dhammaantoodna waqtiga-dhabta ah si ay ugu sarreeyaan go'aan qaadashadaada. Bartilmaameedka macaamiisha guud ahaan 70 + suuqyada adoo adeegsanaya in ka badan 200 astaamaha bulshada iyo habdhaqanka.
Adeegyada Cilmi baarista - Khabiirada ku xeel dheer guryaha ee Toluna oo ay weheliso shirkada ay walaalaha yihiin Harris Interactive leedahay khibrad qotodheer oo qotodheer oo kadhigi karta waxa aan la garanayn, la yaqaan. Khibradooda waxay kuxirantahay xalalkeena is-adeegsiga xalalka iswada. Ama waxay qaabeyn karaan barnaamij u gaar ah khabiir cilmi baaris ah. Adeeg kasta oo daboolaya baahiyahaaga.
Jadwalka Demo Bilowga Toluna
Tags: muunad iswadadhaqanka macaamiishaaragtida macaamiishawadahadal toos ahcilmi baarisadeegyada cilmi baaristatoluna
Zombie-Raacayaasha: Dhimashadu Waxay Ku Socdaan Adduunyada Suuqgeynta Saameynta